तम्घासकी उज्यालो दिदी – Gulmiews
तम्घासकी उज्यालो दिदी
२५ बैशाख २०७२, शुक्रबार ११:०६ Sanju Kauchha
No comments	-मोदनाथ प्रश्रीत
ईश्वरा दिदी नेपाल महिला सङ्गठन गुल्मी जिल्ला अध्यक्ष हुनु भयो रे ।
अर्को विवाह गरेर जीवनको नञा यात्रा फेरि सुरु गर्नु भयो रे ।
जव म गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास सम्झन्छु, साम्स्कृतिक गौरव वोकेको रेसुङ्गा पर्वत मेरो आँखा अगाडि उभिन्छ । त्यसको शिखरमा उन्नाइसौं शताव्दीका सन्त शशीधरले मानवतावादी जोसमनी सन्त शशीधरले मानवतावादी जोसमनी सन्त सम्प्रदायको स्थापना गरेको दृश्य कल्पनामा आउँछ । जङ्गलका वीचको शान्त सुन्दर तपोभूमिले अहिले पनि मेरो मनलाई चरो वनाअ‍े उडाइरहेको अनुभूति हुन्छ ।
रेसुङ्गाको पश्चिम फेदीमा वसेको तम्घास वजारसित मेरा धेरै सम्झनाहरु गाँसिअ‍ेका छन् । २०२१ साल वैशाखमा म सुन्दर सपना वोकेर तम्घास पुगेको थिअ‍ें । उधारो सपना दिअ‍ेका थिअ‍े शिक्षा अधिकारी भीष्मले, तर त्यहाँका वडाहाकिमले सपनामा तातोपानी खन्याइदिअ‍ेका थिअ‍े । त्यस्तो अप्ठेरो स्थितिमा मलाई हार्दिक रूपले सहयोग गर्ने, मन र अनुहार दुवै उज्यालो भअ‍ेकी अ‍ेउटी दिदी मेरो स्मृतिपटमा नाचिरहन्छिन् ।
२०२० मा म वनारसमा सम्स्कृत साहित्यमा शास्त्री (अन्तिम वर्ष) र आयुर्वेदमा आचार्य (पहिलो) वर्षको परीक्षाको तयारीमा थिअ‍ें । त्यस वर्षको माघमा विशेष कामले रिडी वजार आअ‍ेको थिअ‍ें । त्यहाँ शिक्षा अधिकारीसँग भेट हुँदा उनले ‘शास्त्रीको परीक्षा दिअ‍ेर आउनोस्, तम्घास हाइस्कुलमा तपाईंलाई शिक्षक नियुक्त गर्ने म व्यवस्था गर्छु ।’
मैले आयुर्वेद चिकित्सकको काम गर्ने र देशमा वनौषधि उपचारको जागरण ल्याउने सोच वनाअ‍ेको थिअ‍ें । त्यस निम्ति आर्थिक सङ्कलन गर्न केही समय शिक्षकको काम पाउने आश्वासनले म ढुक्क थिअ‍ें । वनारस वस्दा केही समय ‘नेपाली छात्र परिषद्’मा काम गर्दा म नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थक थिअ‍ें । तर, काङ्ग्रेसका नेताहरुले सुवर्ण शमशेरलाई घुँडासम्म निहुरेर ‘स्वस्ति’ गरेको देखेपछि म त्यस समर्थनवाट घोषित रूपमै वाहिरिअ‍ेको थिअ‍ें । साहित्य र आयुर्वेदलाई सेवा र मेवा वनाअ‍ेर जीवनको रथ हाँक्ने सपना थियो मेरो । त्यही सपनामा रमाउँदै २०२१ को नञा वर्ष सुरु हुनासाथ तम्घास पुगेको थिअ‍ें म । त्यहाँ पुग्दा त्यो सानो उपत्यका र भर्खर उदाउन लागेको वजार ज्यादै रमाइलो लागेको थियो ।
उपल्लो तम्घासमा सानिमासासू पुर्णकला आचार्यको घर थियो । त्यहीं डेरा गर्ने निधो पहिलो नै भअ‍ेको थियो । राति त्यहीं वसेर विहानै भीष्मको निवासमा पुगें । निकै मिलनसार र सहयोगी भावनाका थिअ‍े उनी । भेट हुनासाथ प्रसन्न मुद्रामा हात मिलाअ‍े । ‘तपाईंको प्रतीक्षामै थिअ‍ें, अव तम्घासमा साहित्यिक रमाइलो हुन्छ’ भन्दै गर्दा भित्रवाट चिया आयो । चियाको चुस्कीसाथ केही पारिवारिक कुरा गर्यौं । उपल्लो तम्घासमा डेरा लिअ‍ेको वताअ‍ें मैले । ‘म त जागिरे मान्छे, सरुवा नभअ‍े अ‍ेक÷दुई वर्षसँगै वसिने भो । केही समय हाइस्कुलमा पढाउनोस्, मैले कुरा गरिसकेको छु । त्यसपछि आयुर्वेदिक सेवातिर कदम चाल्नुहोला’, हार्दिक भावमा भने उनले । ‘तपाईं अ‍ेकछिन यतै वस्नोस्, म सन्चालक समितिका अध्यक्ष र वडाहाकिमसित पनि यसवारे कुरा मिलाउँछु’ भन्दै भीष्म निस्के ।
म उनको टेवुलमाथिका कितावका पाना पल्टाउँदै प्रतीक्षामा वसें । निकै वेरसम्म उनी नआअ‍ेपछि म वाहिर निस्केर दायाँ–वायाँका घर र पसल हेर्दै वजारको पल्लो छेउसम्म पुगेर फर्कें । केही समयमा भीष्म फर्के र लामो सास फाल्दै थचक्क कुर्सीमा वसे । उनको अनुहार वडो उदास थियो । अ‍ेकछिन वायाँहातले चिउँडो समाअ‍ेर दलिनतिर हेर्दै भने, ‘के भनौं खै प्रश्रितजी, म तपाईंको सामु ठुलो धोकेवाज जस्तो हुने भअ‍ें । क्षमा गर्नुस्, म साह्रै दुःखी छु ।’
के पर्यो त्यस्तो समस्या ? समितिका अध्यक्षले मानेनन् कि कसो ?
‘होइन, उनी त सहमत थिअ‍े तर वडो गड्वड गरे वडाहाकिमले । ‘अ‍े, स्कुलमा अराष्ट्रिय तत्व घुसाउन खोजेको तपाईंले ? राजा र व्यवस्थाविरोधीलाई शिक्षकको जागिर दिने हामीले ? मोदनाथ वनारसमा वसेर राजा र पन्चायती व्यवस्था विरुद्ध विद्यार्थी भड्काउने खुङ्खार काङ्ग्रेस हो । स्कुलतिर होइन म जेलतिर पठाउँछु उसलाई ।’ भन्दै अ‍ेकदम कड्के वडाहाकिम । तपार्इंले काङ्ग्रेस छोडेको कुरा मैले वताअ‍ेपछि उनी केही ठन्डा भअ‍े, तर शिक्षकमा राख्न हुँदैन भन्ने कुरामा अड्डी लिअ‍े । अव म के गरुँ, लाचार छु ।’
म पनि झसङ्ग भअ‍ें र पहिरोवाट चिप्लिअ‍े जस्तो अनुभव गरें, तर त्यस्ता अनेक हण्डर–ठक्कर खाइसकेको हुनाले म सम्हालिअ‍ेर ‘चिन्ता छोड्नोस् तपाईंले, म अव अर्को वाटो पहिल्याउँछु । जीवनका हरेक मोडमा घुम्न सक्ने आँट छ ममा । म तपाईंलाई भोलि भेट्छु, मेरो कारणले कुनै चिन्ता नलिनोस्’ भनेपछि उनी थोरै आश्वस्त भअ‍े । तर, उनको अननुहारमा विषादको वादल भने मडारिरहेको थियो ।
म केहीवेर त्यहाँ वसेर विदा भई वजारमा निस्कें । केही पर अ‍ेउटा पसलमा रद्दी अक्षरमा लेखिअ‍ेको साइनवोर्ड देखें । अनि अलि परसम्म हेर्दै गअ‍ें, त्यस्तै गिद्दखुट्टे अर्को साइनवोर्ड देखें । मलाई नञा वाटो खुलेजस्तो अनुभव भयो । सोचें, ‘अव साइनवोर्ड लेखेर तम्घास र जिल्ला भरिका स्कुल तथा कार्यालय सजाउँछु । काङ्ग्रेसै छाडेर पनि हाकिमका आँखाले मलाई काङ्ग्रेसै देख्छन् भनेपछि यथार्थ कुरा थाहा पाउँदै जालान् ।’
म यही सोचेर अ‍ेकछिन सडकमा उभिअ‍ेको वेला उज्यालो अनुहारकी अ‍ेकजना महिला पश्चिनतिरवाट आइन् र टक्क मेरा अगाडि उभिअ‍ेर भनिन्, ‘तपाईंसँग कहाँ भेट भयो ? कहाँ भेट भअ‍ेको थियो हँ ? तपाईं मोदनाथ प्रश्रित होइन ?’
मैले पनि उनलाई पहिले कताकता भेटेजस्तो लागेर भनें, ‘हो, तपाईंले ठीक अन्दाज गर्नभो । अ‍े हे, तपाईं र मेरो अर्गली भेलामा भेट भअ‍ेर कुराकानी भअ‍ेको होइन र ? नमस्ते ईश्वरा दिदी !’
‘हो त नि ! ओहो नमस्ते भाइ, कहिले आइपुग्नु भयो यहाँ ? तपाईं आउनुहुन्छ भन्ने कुरा भीष्मवाट थाहा पाअ‍ेकी थिअ‍ें । आइपुग्नु भयो, खुसी लाग्यो । हिँड्नोस् मेरो आश्रमतिर जाऊँ र आनन्दले वसेर कुराकानी गरौंला । अव तपाईंका कविता पनि सुन्न पाइने भयो’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँको सेतो साडी र आश्रम शव्दले मलाई केही कुत्कुती जगायो । दिदीको निवासतिर गयौं । सडकछेउमै आफ्नै घरमा वस्नुभअ‍ेको रहेछ । सफा वैठक, खाटमाथि कम्वल ओछ्याइअ‍ेको । सिरानीपट्टि केही पुस्तक । भित्तामा केही तस्विर ।
सोधें – परिवारमा को–को हुनुहुन्छ ?
भन्नुभयो – अ‍ेक्ली तपसीको आश्रम ।
हातमा हेरें, सुनका चुरी, वायाँहातमा औंठी, कानमा टप । सेतो साडी । निधार खाली । करिव ३०–३२ को उमेर । कस्तो आश्रम होला यो ? कुनै धार्मिक आश्रम हो कि, वैधव्यको वेदना गृह ? खुल्दुली लाग्यो, सोधें– दिदी, कस्तो आश्रम हो यो ?
‘आश्रमवारे वताउँदै जाउँला, तपाईं अव तम्घासमै वस्ने भअ‍ेपछि देशको, समाजको वारेमा छलफल गरौंला, तपाईंका कुरा पनि सुनौंला, आफ्ना अनुभव पनि वताउँला । पअिले चिया वनाउँछु, अनि खाना खाअ‍ेर वेलिविस्तार गरौंला ।’
उहाँ उठ्न लाग्नुभयो । दिदी ! चिया मैले भर्खर खाअ‍ें । खाना उपल्लो तम्घासमा पाकेको छ । वस्नोस् ! म पहिले आफ्नै कुरा गर्छु ।
भन्दाभन्दै दिदी भित्र जानुभो र केही मिनेटमा चिया लिअ‍ेर आउनुभयो । चिया सुर्कँदै भनें मैले– म शिक्षक वन्न आअ‍ेको, भीष्मको निम्तोमा, तर परें वडाहाकिमको वक्रदृष्टिमा । अव म आफ्नै हातका सीपको प्रयोग गर्छु । यहाँ साइनवोर्ड लेख्ने राम्रो कलाकार रहेनछ, त्यही काम सुरु गर्छु अव । यहीं आयुर्वेदिक उपचार पनि सुरु गर्छु ।
‘पख्नोस्, नहतारिनोस्, म पनि अ‍ेकपटक कुरा गर्छु वडाहाकिमसित । अ‍ेउटा हाकिमले वोलाउने अर्काले वाटो छेक्ने, यो त साह्रै वेठिक भयो । कस्ता हुन् यी हाकिमहरु ।’
दिदीको वोलीमा ओज थियो, निर्भीकता थियो हाउभाउमा । अ‍ेकछिन तिनै विषयमा कुरा गर्यौं । तम्घासजस्तो ठाउँमा त्यस्तो हकी कुरा गर्ने महिला भेटिंदा मेरो उत्साहमा पनि राप थपियो ।
मैले भनें– काम लाग्दैन दिदी, कुरा नगर्नोस् ।
‘म विचार त गरिहेरौं, वडाहाकिम पनि यसै देशका मान्छे त हुन् क्यारे, आकाशवाट झरेका होइनन् ।’ उहाँँले वडो उत्साहसाथ निकै कुरा गर्नुभो । उहाँको हकी स्वभाव र आँट देखेर कुतूहल वढ्यो ।
तपाईंलाई कुरा गर्ने इच्छा नै च भने गर्नोस् तर म यसमा आशावादी छैन । म अहिले खाना खान माथि जान्छु । भोलि विहान आउँछु र वाँकी कुरा गरौंला भन्दै ईश्वरा दिदीसँग विदा भअ‍ेर म हिंडे ।
माथि सासूसँग सल्लाह भयो, उहाँकै घरको दलानमा सानो औषधालय सुरु गर्ने तर त्यसको निम्ति केही पैसा त जम्मा गर्नुपर्दथ्यो नै । मैले खाइनवोर्ड लेखनलाई नै भरपर्दो माध्यम ठम्याअ‍ें ।
अर्को दिन तल झरेर दिदीलाई भेट्नासाथ कड्कनुभो – ‘कस्तो वडाहाकिम होला यो ? मान्छेको योग्यता–क्षमता हेर्नु छैन, राजनीतिको तगारो हाल्ने ! मैले वडाहाकिमलाई भनें– योग्य मान्छेलाई शिक्षकको काम गरेर जीवन चलाउन पनि नदिने ? प्रश्रितले यहाँ पन्चायती व्यवस्था पल्टाउन झन्डा उचाल्छु त भनेका छैनन् । कस्तो सोच हो तपाईंहरुको… ।’
वडाहाकिमसँग त्यसरी वाझ्न सक्ने दिदीको आँट देख्दा वडो प्रसन्नता अनुभव गरें मैलें । धेरै धन्यवाद छ दिदी तपाईंलाई । अव सरकारी कामको कुरा छाडिदिऊँ, म यहाँ अपरिचित मान्छे हुँ । साइनवोर्ड लेख्ने काम गर्न सडककै छेउमा अ‍ेउटा कोठा खोजिदिनोस् । म त्यसैवाट भविष्यको मार्गचित्र कोर्छु ।
दिदी र म सडकमा निस्क्याँै । पसल कोठावारे अ‍ेक–दुई घरमा कुरा गर्नासाथ दिदीकै घरको पारिपट्टि शिवराजको घरमा सडकपट्टि खुला भअ‍ेको अ‍ेउटा कोठा भेटियो । महिनाको पचास रुपैंया तय भयो भाडा । मसँग जम्मा पाँच सय रुपैयाँ थियो । अरु पाँच सय भअ‍े तानसेन पुगेर केही औषधि र पेन्टिङका सामान ल्याउन सकिन्थ्यो । नजिकै गोपाल श्रेष्ठको पसलमा सँगै गअ‍ेर भन्नुभो दिदीले – ‘मलाई अ‍ेक महिनाका लागि तीन सय रुपैयाँ दिनोस् त साहुजी ।’ साहुजी थोरै अन्कनाअ‍े तर हार्न सकेनन्, दिअ‍े । त्यहाँ पनि दिदीको प्रभावशाली व्यक्तित्व देखें । घरमा पुगेर आफुले दुई सय थपी पाँच सय रुपैयाँ दिनुभो मलाई । म तानसेन गअ‍ें, सरासर र चार दिनमा आइपुगें– केही औषधि, रङ, व्रसहरु लिअ‍ेर । ‘प्रश्रित कलाकुटी’को चिनोपाटी टाँगियो । मट्टीतेलका खाली टिन कोटर पाता वनाई, सावुनका वाकसको काठका फ्रेमहरु ठोकेर रङ पोत्न सुरु गरिहालें । अ‍ेक–दुई दिन त्यहीं वसेर चित्र कोर्न थालें । तम्घासको वजार सानो भअ‍े पनि दिनहुँ वाहिरवाट अ‍ेक–डेढ सय मानिस त आइरहन्थे । अनि त फटाफट काम पाउन थालें– विद्यालय, पुस्तकालय, सरकारी, अड्डा र पसलहरुका निम्ति साइनवोर्ड लेख्ने । मेरो पसलमा चित्रकला हेर्न र साइनवोर्ड वनाउन दिनहुँ मान्छे झुम्मिन थाले ।
ईश्वरा दिदी दिनको अ‍ेकपटक आअ‍ेर निकैवेर हेर्नु हुन्थ्यो चित्र र साइनवोर्ड वनाअ‍ेको । गुल्मी र अर्घाखाँचीको सन्दर्भमा अ‍ेकदमै नञा र आकर्षक थियो त्यो काम । दिनभरि गाउँले, शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी आइरहन्थे । मानौं, कलाकुटी चित्र प्रदर्शनी कक्ष भअ‍ेको थियो । दिदीले आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरी चित्रहरुको अर्थ सम्झाउनु हुन्थ्यो । भीष्म पनि अ‍ेक–दुई दिन विराअ‍ेर आइरहन्थे त्यहाँ । अ‍ेक महिना भित्रै गुल्मी–अर्घाखाँचीमा चित्रकारको रूपमा परिचित भअ‍ें म । सापटी पैसा तिरें । विहानमा उपल्लो तम्घासमा फाट्टफुट्ट आउने रोगीको उपचार पनि गर्दै गअ‍ें ।
युवाकालको जोस थियो, वाईसवर्ष उमेरको । साँझसाँझ र फुर्सद हुँदा विहान समेत मानव महाकाव्यको सिर्जना पनि चल्न थाल्यो । सासू पूर्णकला हुनुहुन्थ्यो साह्रै सज्जन । उहाँको स्नेह र सहयोगले म कलाकार, कवि र चिकित्सकको नाममा निष्फिक्रीसँग लाग्न पाअ‍ेको थिअ‍ें ।
………….ईश्वरा दिदीसँग धक फुकाअ‍ेर वोल्न …………………….थिअ‍ें म । सहोदर भाइजस्तै भअ‍ेर ………………………निर्भीक स्वभाव भअ‍ेकी महिला, ……………….. राजनीतिमा सक्रिय भअ‍े पनि प्रगति गर्न सक्नु हुन्छ । कुनै व्यवसायमा अघि वढे पनि सफल हुनुहुन्छ । अरु जातजातिका महिला धर्मको नाममा अ‍ेक्लो वैधत्य जीवनको कष्ट व्यहोर्दैनन् । वाहुन परिवारवाट तपाईंले पुनर्विवाहको ढोका खोलिदिअ‍े अरु वालविधवाहरुको पनि आँट आउनेछ । कसैले पनि मरेका लोग्नेको नाममा घोर कष्टमय जीवन विताउन नपर्ने दिन आओस् ।
दिदी भन्नु हुन्थ्यो, ‘विवाह नै गर्नुपर्ने के छ र ? म राजनीतिमा या सामाजिक काममा लागेर उदाहरण वन्न सके अरुले पनि त्यो वाटो पछ्याउलान् । काम गर्दै जाँदा राम्रो अवसर मिले विवाह पनि गर्न सकिन्छ, त्यो कुन ठूलो कुरा भयो र ?’
२०२० सालको समयमा अहिलेजस्तो व्यापक महिला जागरणको कल्पना गर्न पनि गाह्रो थियो । महिलाको पुरानो पुस्ता लगभग पूरै निरक्षर थियो । रुढी र अन्धविश्वास व्याप्त थियो । नञा पुस्ताका साना छोरीहरु केही मात्रामा विद्यालय जान थालेका थिअ‍े । ईश्वरा दिदी त्यसवेला ३३ वर्षकी हुनु हुन्थ्यो । ११ वर्षे उमेरमै विवाह भअ‍ेको रहेछ उहाँको, तर अ‍ेक वर्षछि नै उहाका राता लुगा र सिन्दूर खोसिअ‍ेका रहेछन् । कस्तो वेदनामय थियो उहाँको जीवन, तर उहाँ महिला समाजमा उत्साह र जाँगरणमा कहलिनु भअ‍ेको थियो । उहाँलाई भेट्न वृद्ध आमा आउनु हुन्थ्यो कहिलेकाहीं । छोरीको वेधव्य र राजनीनितक उत्साह दुवै कुराको चिन्ता र सन्तोष देखिन्थ्यो उहाँमा, तर ईश्वरा दिदीमा वैधव्यको खास चिन्ता देखिन्थ्यो । उहाँ कहिले निर्धाहरुको पक्षमा अदालतमा गअ‍ेर पनि कराउनु हुन्थ्यो । अ‍ेप्ठेरोमा परेका मानिस उहाँको घरमा आइरहन्थे, उनीहरुका समस्या सुल्झाउनु हुन्थ्यो ।
मैले तम्घास वस्दा उपचार क्षेत्रमा केही अभ्यास गरें, थुप्रै चित्र वनाअ‍ें र महाकाव्यको जग पनि वसाअ‍ें । मेरो काम सकिने वेलातिर अर्घाखाँची वल्कोट हाइस्कुलवाट शिक्षक वन्ने निम्तो आयो । तम्घासमा र गुल्मीकै उपलव्धि भनौं कलाकारको रूपमा चर्चित भइसकेको थिअ‍ें म । ईश्वरा दिदी आफ्नै दिदीजस्तै हुनुभअ‍ेको थियो । पूर्णकलाज्यूको म धेरै आभारी भअ‍ेको थिअ‍ें । गोपाल श्रेष्ठले महाकाव्य लेखनमा उत्साह थपिदिनु भअ‍ेको थियो । शिवराजजी लगायत धेरै मित्र वनेका थिअ‍े त्यहाँ । केही शिक्षक साथी र विद्यार्थी मलाई त्यहाँ शिक्षक वन्न नदिअ‍ेकोमा अलिअलि गुल्मीका पूर्वराजा चिरन्जीवी गराउन आअ‍ेका गुल्मीका पूर्वराजा तिरन्जीवी शाहको घोर विपदमा डुवेको अन्तिम जीवन पनि त्यहीं देखेको थिअ‍ें मैले ।
तम्घासवाट विदा हुँदा ईश्वरा दिदीको भावुक मुद्रा देखेर निकैवेर भावनामा रुमल्लिअ‍ेको थिअ‍ें म पनि । सासूले आँसु वर्साउँदै मेरा गह पनि रसाअ‍ेका थिअ‍े । अ‍ेक वर्षपछि सुनें मैले– ईश्वरा दिदी नेपाल महिला सङ्गठन गुल्मी जिल्ला अध्यक्ष हुनुभयो रे । जव म वुटवलमा ‘लुम्विनी सन्देश’ साप्ताहिकको सम्पादन गर्दै थिअ‍ें, रोचक खवर सुनें– दिदीले अर्को विवाह गरेर जीवनको नञा यात्रा फेरि सुरु गर्नुभयो रे । खुसीले गद्गद् भयो हृदय ।
म तम्घास वस्दाकी सहृदयी उज्याली दिदीसँग भेट नभअ‍ेको धेरै वर्ष भयो । तर जवजव भान्जी मन्जुसँग भेट हुन्छ, दिदीको नञा अवतारजस्तै लाग्छ । मन्जुको प्रतिभा, क्रियाशीलता र ख्याति देख्दा सन्तोषको साथै सुमधुर आनन्द अनुभव गर्छ हृदयले ।
(झर्रोवादी आन्दोलनको पत्रिकाबाट साभार गरिएको यो संस्मरणको ब्याकरण जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।)